यो सिजन आईपीएल गुमाउने ४ स्टार खेलाडी – WicketNepal
Sakar Sedhain, २०७७ चैत्र १९, बिहीबार २०:३१
बहुप्रतिष्ठित इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १४ औं संस्करण अप्रिल ९ बाट भारतमा सुरु हुदैछ। गत सिजनको आईपीएल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको थियो। तर, यस सिजनको आईपीएलको लिग स्टेजका खेलहरु भने भारतको अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नाई, दिल्ली, मुम्बई र कोलकाता गरि ६ शहरमा खेलिने छ। सधैंझैँ यो सिजन पनि आईपीएल उपाधिका लागि ८ टोलीहरुबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हाल सबै टोलीहरु अन्तिम अभ्यासमा व्यस्त रहेका छन्।
यसअघि टोलीहरुले खेलाडी रिटेन र रिलिज प्रक्रियापछि फेब्रुअरी १८ मा सम्पन्न मिनी अक्सनबाट आफुलाई सुहाउँदो खेलाडीहरुलाई भित्र्याएर टिम तयार पारेको थियो। तर, रिलिज तथा मिनी अक्सनबाट बिक्रि भएका केहि खेलाडीहरु व्यक्तिगत तथा चोटका कारणले आईपीएलबाट पुरा सिजनका लागि बाहिरिएका छन्। उनीहरुको प्रतिस्थापनमा फ़्रेन्चाइज टोलीहरुले अन्य बैकल्पिक खेलाडीहरुलाई आबद्ध गर्न भने पाउनेछन्। यस सिजनको आईपीएलबाट बाहिरिएका ४ स्टार खेलाडीहरु यस प्रकार छन् :-
१.श्रेयस अय्यर (दिल्ली क्यापिटल्स)
गत सिजन दिल्लीलाई इतिहासमै पहिलो पटक आईपीएलको फाइनलमा पुर्याउन सफल कप्तान श्रेयस अय्यरले चोटका कारण यो सिजनको आईपीएल गुमाउने छन्। दिल्लीका कप्तान तथा प्रमुख ब्याट्सम्यान अय्यरले इंग्ल्याण्डसँगको ३ खेलको अन्तराष्ट्रिय एकदिवसीय शृंखला अन्तर्गत पहिलो खेलमा काँधमा चोट बोक्न पुगेका थिए।
इंग्ल्याण्डको पारीको आठौँ ओभरमा जोनी बेयरस्टोले ड्राइभ गरेको बललाई अय्यरले कभर क्षत्रमा डाइभ गरेर रोक्न खोज्दा उनि चोटिल हुन पुगेका थिए। लगत्तै उनलाई स्क्यान गर्न लगिएको थियो। रिपोर्टका अनुसार २६ वर्षीय अय्यरलाई काँधको सब्लुक्सेसन भएको छ जसकारण उनको मेजर शल्यक्रिया गरिनेछ। उनको चोट निको हुन करिब ५ महिना लाग्ने बुझिएको छ।
२०१८ को सिजनको बीचबाट दिल्लीको कप्तानी सम्हालेका अय्यरले गत सिजन १७ खेलमा ३४.६० को औसत तथा १२३.२७ को स्ट्राइल रेटमा ५१९ रन बनाएका थिए। दायाँ हाते ब्याट्सम्यान अय्यरले हालसम्म आईपीएलमा ७९ खेलमा ३१.४२ को औसत तथा १२६.०७ को मध्यम स्ट्राइक रेटमा २२०० रन बनाएका छन्। उनि आईपीएलबाट रुल्ड आउट भएसंगै दिल्ली टोलीमाथि कालो बादल मडारिएको छ। दिल्लीले अय्यरको स्थानमा युवा देब्रे हाते ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्तलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको छ। पन्तसंग कप्तानी गरेको अनुभव खासै नहुदा दिल्लीलाई अय्यरको कमि महसुस हुनेछ।
२.जोश फिलिप्पे (रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोर)
पछिल्लो सिजन अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिगमा शानदार ब्याटिंग गरेका जोश फिलिप्पे उक्त प्रतियोगिताको दोस्रो सर्वाधिक रनकर्ता थिए। २३ वर्षीय फिलिप्पेले व्यक्तिगत कारण देखाउदै आईपीएलबाट आफ्नो नाम झिकेका छन्। अष्ट्रेलियन विकेटकिपर ब्याट्सम्यान फिलिप्पेले गत सिजन बैंगलोरबाट आईपीएलमा डेब्यु गरेका थिए। उनले आईपीएलमा ५ खेलमा ७८ रन बनाएका छन्। बैंगलोरले आफ्नो आक्रामक ब्याटिंग शैलीका लागि चिनिने प्रभावशाली युवा खेलाडी फिलिप्पेलाई अवश्य मिस गर्नेछ।
हालसम्म आईपीएलको उपाधि जित्न नसकेको बैंगलोरले उनको प्रतिस्थापनमा न्युजिल्याण्डका ब्याट्सम्यान फिन एलेनलाई भित्र्याएको छ। २१ वर्षीय एलेनले १३ टि-२० खेल खेल्दा ४८.८ को औसत तथा १८३.३ को विस्फोटक स्ट्राइक रेटमा ५३७ रन बनाएका छन्। न्युजिल्याण्डको घरेलु प्रतियोगिता सुपर स्ल्यामको यस सिजनमा ११ खेलमा ५१२ रनबनाएका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान एलेन सो प्रतियोगिताको सर्वाधिक रनकर्ता थिए। अक्सनमा न्युनतम २० लाख भारु बेसप्राइस राखेका एलेन अन्सोल्ड रहेका थिए।
३. मिचेल मार्श (सनराइजर्स हैदरावाद)
अष्ट्रेलियाका अल-राउण्डर मिचेल मार्शले व्यक्तिगत कारण देखाउंदै १४ औं संस्करणको आईपीएलबाट नाम झिकेका छन्। लामो समय जैव सुरक्षित घेराभित्र बस्न असमर्थता देखाउदै मार्शले भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ( बिसीसीआई ) र आफ्नो टिम सनराईजर्स हैदरावादलाई केहि दिन अघिनै जानकारी गराएका थिए। मार्श गत सिजन पनि प्रतियोगिताबाट चोटका कारण रुल्ड आउट हुन पुगेका थिए। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै बैंगलोरविरुद्ध खुट्टा ट्विस्ट हुदाँ उनले आईपीएल गुमाउन परेको थियो।
हैदरावादले उनको स्थानमा इंग्ल्याण्डका आक्रामक ओपनिंग ब्याट्सम्यान ज्याशन रोयलाई भित्र्याएको छ। अक्सनमा न्युनतम २ करोड भारु बेसप्राइस राखेका रोय अन्सोल्ड भएका थिए। रोयले २०१७ को सिजनमा गुजरात लायन्सको प्रतिनिधित्व गर्दै आईपीएलमा डेब्यु गरेका थिए। २०१८ मा दिल्ली क्यापिटल्समा आबद्ध भएका ३० वर्षीय रोयले गत सिजन व्यक्तिगत कारण देखाउदै आईपीएलबाट नाम झिकेका थिए।
४. जोश हेजलवुड (चेन्नई सुपर किंग्स)
अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर जोश हेजलवुडले यो सिजनको आईपीएल गुमाउने भएका छन्| ३० वर्षीय खेलाडी अघिल्लो वर्ष २०२० अगस्ट देखि यो वर्ष जनवरीसम्म जैव सुरक्षित घेरामा रहेका थिए। अस्ट्रेलियाको व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय खेलतालिकालाई ध्यानमा राखेर अनुभवी खेलाडीले त्यसको लागि मानसिक र शारीरिक रुपमा आफुलाई तयार राख्न आईपीएल नखेल्ने निर्णय लिएका हुन्।
गत सिजन चेन्नईबाटै आईपीएलमा डेब्यु गरेका हेजलवुडले ३ खेलमा ६.४० को इकोनोमी रेटमा १ विकेट लिएका थिए। यस सिजन चेन्नईको सर्वाधिक खेलहरु मुम्बईको फास्ट बलरलाई मद्धत गर्ने वान्खाड़े स्टेडियममा रहेको कारण चेन्नईले उनको अनुपस्थिति महसुस हुनेछ।